Companieslọ ọrụ SaaS Excel na Ọganiihu Ndị Ahịa. Ị nwekwara ike ... Nke a bụ otu | Martech Zone
Companieslọ ọrụ SaaS Excel na Ọganiihu Ndị Ahịa. Ị nwekwara ike… na nke a bụ otu
Monday, August 23, 2021 Monday, August 23, 2021 Ọnye na -bụ Andy Mickelson?
Akụrụngwa abụghị naanị ịzụrụ ihe; ọ bụ mmekọrịta. Ka ọ na-etolite ma na-emelite iji mezuo ihe teknụzụ chọrọ, mmekọrịta ahụ na-eto n'etiti ndị na-eweta ngwanrọ na onye njedebe-onye ahịa-ka usoro ịzụ ahịa na-aga n'ihu na-aga n'ihu. Software dị ka ọrụ (SaaS) ndị na -enye ọrụ na -akarịkarị ọrụ ndị ahịa ka ha wee dịrị ndụ n'ihi na ha na -etinye okirikiri ịzụ ahịa mgbe niile n'ọtụtụ ụzọ karịa otu.
Ezi ọrụ ndị ahịa na-enyere aka hụ afọ ojuju ndị ahịa, na-akwalite uto site na mgbasa ozi mgbasa ozi na ndị na-ekwu okwu ọnụ, ma na-enye ndị ọrụ obi ike ịgbasa mmekọrịta ha site na ọrụ na ike ndị ọzọ. Maka ndị na -enye SaaS na -arụ ọrụ na ngalaba B2B, nke a nwere ike ịpụta ọnụọgụ dị mkpa nke oche na ikikere agbakwunyere, ha niile sitere na otu onye ahịa.
N'ime akụ na ụba ọrụ asọmpi taa, nkwado ndị ahịa pụrụ iche nwere ike bụrụ ihe kachasị mkpa dị iche iche. N'iburu nke ahụ n'uche, ebe a bụ ndụmọdụ ole na ole bara uru sitere na mpaghara SaaS:
1. Ekwela ka ihe ọma (ịchekwa ego) bụrụ onye iro nke zuru oke (afọ ojuju ndị ahịa).
Idebe ọnụ ahịa ala bụ n'ezie ihe mgbaru ọsọ kwesịrị ekwesị. Ewere ya nke ukwuu, agbanyeghị, ọ nwere ike ibute ụfọdụ mkpebi azụmaahịa na -adịghị mma.
Ọtụtụ arụmọrụ ọrụ ndị ahịa anwalela ijikwa ụgwọ site na iwepụ nkwado ndị ahịa ha, yana ịta ahụmịhe ndị ahịa dị ka nsonaazụ ya. Ndị ọzọ ewepụtala nhọrọ nhọrọ onwe onye, ​​nke nwere ike bụrụ okwu mkparị maka "gụọ akụkọ a wee chọpụta n'onwe gị," mana ndị na-enye SaaS bụ ndị ọkachamara n'ịghọta otu nha adabaghị na ha niile. Ọtụtụ puku afọ nke teknụzụ na Gen Zers nwere ike ịdị mma na nhọrọ ọrụ onwe onye dị n'ịntanetị, mana Gen X na ndị ahịa nwa ọhụrụ na-ahọrọ iji ekwentị na-ele ọrụ onwe onye anya dị ka ụzọ dị mfe iji wepụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Ndị otu nkwado na-anwa ịhazigharị ihe ịma aka ọnụ ahịa site na ịmachi oge ịkpọtụrụ na-efufu isi. Site n'ịkwalite ndị ọrụ iji belata oge etinye na oku ọ bụla, nkata, ozi, ma ọ bụ ozi -e, ọ dị mfe ịghọtahie ma ọ bụ leghara mkpa ndị ahịa anya. Ahụmahụ na -adịghị mma na -abụkarị nsonaazụ ya.
Ọ dị mkpa ịghọta mkpa mkpakọrịta dị mma maka iguzosi ike n'ihe ndị ahịa ogologo oge, ọkachasị n'ime usoro ịzụ ahịa mgbe niile. Ruo mgbe ụlọ ọrụ na-ekwupụta ọnụ ahịa churn, enweghị ntụkwasị obi, na mbibi aha ndị aha, ịchekwa ego dị mkpụmkpụ ga-aga n'ihu na-emeri ihe ịga nke ọma ogologo oge.
2. Hazie metrik abụọ a ụzọ.
Ezigbo ndị ahịa na ndị otu nkwado na -elekwasị anya na metrik ole na ole: ọkachasị:
Ọkara ọsọ na nzaghachi - metric (ihe dị ka ọsọ ọsọ ịza, ma ọ bụ ASA), nke enwere ike tụọ site na ikpo okwu nkwado ọgbara ọhụrụ ọ bụla; na otu gbadoro anya na afọ ojuju ndị ahịa, yana igwe anakọtara site na nyocha ngwa ngwa kọntaktị. Oge nzaghachi bụ barometer maka ịdị mma, nnweta na afọ ojuju, yabụ nzaghachi ga -adị ngwa ngwa enwere ike.
Akara afọ ojuju ndị ahịa - yana nkwupụta efu, gosi ma ọ bụ mkpa onye ahịa maka ịdị mma ọrụ n'ozuzu ya (QoS) zutere. Kama iji ikpe dị irè na -eji metrik dị ka mkpebi mbụ-aka na oge oku - nke enwere ike iji ya mee ihe n'ụzọ dị mfe ma n'ikpeazụ anaghị ekpebi QoS - ndị na -enye SaaS na -enweta ihe ịga nke ọma n'ịtụle ASA na afọ ojuju n'ozuzu ya.
3. Chee echiche banyere onye ahịa dị ka a ga -asị na ọ bụ mama gị na ekwentị.
Mmetụta ọmịiko bụ nnukwu akụkụ nke nkwado ndị ahịa. Were ya na ọ bụ nne gị ma ọ bụ onye ezinụlọ gị na ekwentị; ị ga -achọ ka ụlọ ọrụ nkwado zaa ngwa ngwa (ma ọ bụ nye ya nhọrọ ịnata nloghachi). Ị ga-achọkwa ka onye nnọchi anya ahụ jiri ndidi na ọmịiko jiri ụzọ ọ bụla nke ihe ngwọta were ya, ọbụlagodi na nke ahụ pụtara ịgwa ya okwu site na njikọ njikọ onwe. N'ikpeazụ, ị ga -achọ ka onye nnọchi anya ahụ nye ya oge niile ọ chọrọ, ọbụlagodi na nke ahụ na -ewe oge oku gafere oge ebighi ebi.
Jụọ onye njikwa ọrụ ndị ahịa na ụlọ ọrụ SaaS ọ bụla na ha ga-ekweta na ọzụzụ na nka ngwanrọ maka ndị ọrụ nkwado ndị ahịa abụghị naanị ihe dị mma ịnwe; kama, ọ dị mkpa. Ọbụlagodi na ọzụzụ ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ ahụ dị mma yana akara ASA karịrị nkezi, ịgwọ ndị ahịa ọ bụla dịka onye otu ezinụlọ ga -eme ka ndị ọrụ kpaa oke gbasara akara gị karịa ihe ndị ọzọ niile.
4. Kwalite ndị nnọchi anya gị na ngalaba ndị ọzọ
Mwepụ nke ime kwesịrị ịbụ metric kacha egosipụta ihe ịga nke ọma nkwado ndị ahịa. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na-akwalite ndị nnọchi anya ndị ahịa ya na-arụ ọrụ nke ọma na akụkụ ndị ọzọ nke nzukọ a, ọ pụtara na ọ bụghị naanị ọzụzụ nke ọma kamakwa inye ndị ọrụ ahụ ụzọ ọrụ.
Ngalaba ọrụ ndị ahịa mara mma anaghị atụ egwu ịhapụ ndị nnọchi anya ha ka ha gaa n'ahịa, mmesi obi ike dị mma, mmepe ngwaahịa, ma ọ bụ ọzụzụ ndị ọzọ. Ọ pụtara na ndị nnọchi anya ahụ amụtala akara ahụ yana ike ya na ohere maka itolite site na mkpughe ihu ha. Dị ka ndị gụsịrị akwụkwọ na “sistemụ ugbo” nke ụlọ ọrụ ahụ, ha nwere nghọta na omume bara oke uru nke a ga -eji kpọrọ ihe na azụmaahịa niile.
Na -echegharị ihe dị mkpa iji mee ka ihe ịga nke ọma (onye ahịa) nwee ọganiihu
Ndị ọchụnta ego na -enwe mmasị ịsị, "A na -ejikwa ihe a tụrụ atụ." Na ọrụ ndị ahịa, agbanyeghị, ihe a na -atụkarị na -enweta manipulated. Ndị na -enye SaaS dị mma n'ịzere ọnyà nke nha n'ihi na ha ghọtara na omume ahụ na -ewepụ ọrụ n'aka ndị ahịa kama ịgakwuru ha.
Ọ bụ ụwa na -adịghị ahụkebe ebe ahụ, ndị ahịa na -eji ahụmịhe kpọrọ ihe karịa ihe ndị ọzọ niile. Otu ụlọ ọrụ si emeso ndị ahịa ya opekata mpe dị ka ngwaahịa ọ na -ere. Ndị na -eweta ngwanrọ nwere ike ree nke mbụ S in SaaS, mana iji nwee ihe ịga nke ọma, ha ga -abụrịrị nna ukwu na nke abụọ S. Nke ahụ bụ echiche ụlọ ọrụ ọ bụla - yana onye ahịa ọ bụla - ga -enwe ekele.
Tags: asankezi ọsọ ịzankezi ọsọ na nzaghachib2bika ahaezi ndị ahịanjigide ndị ahịaNdị ọrụ nlekọta ndị ahịaarụmọrụ ọrụ ndị ahịaahịa ihe ịga nke ọmamkpebi mbụ-akaogologo oge ahịamma ọrụsaasServicesoftwaresoftware dị ka ọrụ
Ọnye na -bụ Andy Mickelson?
Andy Mickelson bụ osote onye isi oche nke nkwado ndị ahịa maka Vertafore, onye na -eweta teknụzụ teknụzụ mkpuchi. N'ime ọrụ ya, ọ bụ VP onye ahịa na-elebara anya nke nwere nka n'iwu mkpebi siri ike, otu na-eme nke ọma, yana omume kacha mma ndị ahịa na-eche ihu.
Igwe ojii nwere ọgụgụ isi kacha mma: Otu esi eji injin stats gaa nyocha A/B mara nke ọma, yana ngwa ngwa